Manidina ireo mpitsidika miisa COVID mitaingina fiaramanidina manokana ny trano fandraisam-bahiny dimy
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Manidina ireo mpitsidika miisa COVID mitaingina fiaramanidina manokana ny trano fandraisam-bahiny dimy
Marary. Miverena mody. Ity no antoka omen'ny COVAC GLOBAL an'ireo mandeha amin'ny lisitr'ireo hotely kintana dimy mitombo. GLOBAL izao dia nanampy ny famerenana an-tanindrazana COVID-19 ny famerenana an-tanindrazana tsy misy hopitaly ho an'ny Global Membership Program
Ny fihanaky ny COVID-19 any amin'ny hotely na resort na dia tsy misy soritr'aretina aza dia tsy antony hampijanonana ny dia an-tanindrazana rehefa vakansy. Marina izany, raha mijanona amin'ny fandraisam-bahiny misy kintana dimy ianao.
Ny Tyrall Club, Jade Mountain, Hermitage Bay, Cap Maison, Baoase, Chileno Bay Resort, Esperanza, Malliouhana, Bucuti & Tara, ANI, Nicuz, Secret Bay, Exterioral Villa, Falcone Fone, ary Round Hill ankoatry ny hafa dia hametraka anao soa aman-tsara trano fiaramanidina manokana raha nozahana toetra tsara ianao raha nitoetra tao amin'ny hotely fandraisam-bahiny na trano fandraisam-bahiny.
COVAC GLOBAL, no mpamatsy andraikitra voalohany amin'ny famindran-toerana mifandraika amin'ny fitsaboana areti-mifindra.
COVAC GLOBAL, ny programa fidirana ho mpikambana COVID-19 voalohany nahazoana antoka fa «mitondra anao mody rehefa mandeha tsy misy hopitaly» dia nanampy ny dia an-toerana amerikana ho an'ny serivisy vokariny. Ity dia taorian'ny famoahana COVAC GLOBAL tamin'ny volana aogositra 2020 izay natao manokana ho an'ireo mpandeha amerikana ho an'ny dia any ivelany raha tsy efa manomboka ny areti-mandringana. Herintaona taty aoriana, miaraka amin'ny dia lavitra sy raharaham-barotra fialantsasatra miverina amin'ny radara, ny mponina amerikana mandeha an-trano mihoatra ny 300 kilaometatra avy eo an-trano dia afaka mandeha am-pitokisana ankehitriny amin'ny fahafantarana fa raha tokony hanao fifanarahana COVID-19 izy ireo rehefa mandeha any Etazonia, ary koa any ivelany. , COVAC GLOBAL dia hikarakara sy handoa fiaramanidina manokana hitondrana azy ireo hiverina any an-tanànany. Ny orinasa dia marina amin'ny teny filamatra hoe "Get Sick. Miverena mody. ”
Ankoatra izany, COVAC GLOBAL, dia niara-niasa tamin'ny hotely kintana dimy eran'izao tontolo izao izay manolotra ny mpikambana ho an'ny vahininy. Ny lisitra dia ahitana trano fandraisam-bahiny tsara toy ny:
Bucuti sy Tara
Ny Tyrall Club any Jamaika, ohatra, dia manaisotra ny fanahiana tafahitsoka aorian'ny fitsapana COVID-19 tsara. Ity no manantena rehefa mamandrika Tyrall Club.
COVAC GLOBAL, no vahaolana voalohany sy hany fialan-tsasatra COVID-19 izay handamina sy handoavana ny fitaterana manokana any an-trano raha toa ka mizaha toetra tsara ny COVID-19 mandritra ny dianao. COVAC GLOBALNy lalao fanovana mpikambana dia tsy mitaky fampidirana hopitaly raha vao manomboka ny fitaterana. Raha toa ny mpikambana hafa rehetra amin'ny famindrana toerana sy ny fiantohana fiantohana dia mitaky anao hopitaly na mitaky hoe ilaina ara-pahasalamana ny fitondrana anao any an-trano, COVAC GLOBAL dia hampody anao mody amin'ny COVID-19 voalohany.
Manomboka ny vanim-potoana vaovao fitaterana habakabaka ara-barotra any Etazonia
Hatraiza ny mpizahatany misy akony amin'ny hotely Hawaii?